Daawo+Sawiro: Bilicda iyo Dibu dhiska Saldhigga Degmada Hodan – Radio Muqdisho
Bur burkii Dalka ku dhacay Waxii ka dambeeyay Sanadkii 1991 oo ay meesha ka baxday Dowladdii dhexe ee uu majaraha u hayay Generaal Maxamed Siyaad Barre ayaa meesha waxaa ka baxay goobihii loogu adeegi jiray Bulshada Soomaaliyeed sida” Saldhigya Ciidmada Ciidamada Booliska, Xaruumaha Caafimaad ee Dowladda,Ceelashada iyo kuwo kale.
Hasa-yeeshee hada ayaa waxaa socda didaalo lagu soo celinayo Bilicda iyo dibu-dhiska Goobihii loogu adeegi jiray Bulshada Soomaaliyeed sida Saldhigyada.
Taliyaha Saldhiga Degmada Hodan C/fitaax Bashiir Cali Mire oo kaashanaya Bulshada ayaa Dibu- dhis xooggan ku Sameeyay Saldhiga Degmada Hodan oo ka mid ahaa Goobihii ay samaynta ku yeelatay Bur burkii Dalka.
Taliyaha Saldhiga Degmada Hodan C/fitaax Bashiir Cali Mire oo saldhiga loo magacaabay 5-1-2017 ee Sanadkaan ayaa sheegay in asagoo kaashanaaya Bulshada deegaanka ay u suuro gashay Dibu dhiska Saldhiga Degmada si loogu adeego Shacabka Soomaaliyeed.
Waxaana Dibudhis Xooggan lagu sameeyay qeybaha kala duwan ee Saldhiga Sida” Xaafiisyada Saldhiga, Gidaarka Ama Muuqaalka guud ee Saldhiga, qeybta Baarista iyo qaadista dacwadaha iyo qeybta Xamsiga ee lagu xiro eedaysanayaasha.
Tilaabadaan uu qaaday Taliyaha Saldhiga Degmada Hodan Mudane C/fitaax Bashiir Cali Mire ayaa tusaale muuqda u ah in Bulshada Soomaaliyeed ay dhisan karaan Dalkooda haddii ay fahmaan in Dalka anan lagu dhisi karin deeq ama Kaalmo laga sugo Gacmo shisheeye.